Ndị na-emepụta ihe nkpuchi nke KN95 na - emepe emepe - China KN95 Mask
Nkọwa ： FFP1 / FFP2 / FFP3 Respirator Dust Mask NIOSH Disposable N95 Face Mask Na Respirator Product Aha N95 ihe nkpuchi / ffp1 mask / ffp2 mask / ffp3 mask Matures High density non-kpara akwa + akwa arụ ọrụ carbon carbon + na-eme ihe mkpuchi na-adịghị mma akwa ụcha agba ntụ, acha ọcha, ọkwa ngosipụta anụnụ anụnụ Ee Typedị Nkwupụta Nkwupụta Nkwupụta ntị nti / Nrọchi Niosh, N95 Nchedo ọkwa KN95 BFE> = 95% ngwugwu 30 pcs / igbe, igbe 10 / katọn. Oke katoonu: 6 ...
Gịnị bụ uwe nchebe ahụike? - Nkowa ya na uwe nchebe ahuike, nke a makwara dika uwe nchedo nke ulo ogwu, otutu ihe nchedo ma obu mkpuchi. Uwe mkpuchi ahụike na-ezo aka uwe nchebe nke ndị ọrụ ahụike (ndị dọkịta, ndị nọọsụ, ndị ọrụ ahụike ọha, ndị na-asacha ọcha, wdg) na ndị mmadụ na-abanye n'otu mpaghara ahụike (dị ka ndị ọrịa, ndị ọbịa n'ụlọ ọgwụ, ndị na-abanye na ebe oria, wdg) . Uwe mkpuchi ahụike nwere ezigbo moi ...
Isiokwu a ga-akọwa nke ọma uwe mkpuchi ahụike n'akụkụ ndị a. Mmepụta uwe nchebe ọgwụ Gịnị bụ akụrụngwa akụrụngwa na arụmọrụ nke ihe mkpuchi ahụike. Emeputa uwe nchebe. Ihe ndị a chọrọ maka ụdị akwa mkpuchi ahụike Kedu ụdị elele nke na-ahụkarị? Kedu ihe ihe nnwale ahụ? Etu esi eji akwa mkpuchi n'ụzọ ziri ezi? Yiri akwa uwe mkpuchi. Iwu ka wepụ nke ...
Nkpuchi 3m KN95